ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ကာတွန်းဟန်လေး၏ ထိထိမိမိကာတွန်းများ
(ကိုဟန်လေး၏ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ...)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:53 AM
ဟန်လေးရဲ့တဘတ်သတ် တစောက်ကန်းနဲ့အပြုသဘော မဆောင်တဲ့ ဆွဲချက်တွေကြောင့် ဧရာဝတီမှာတောင် ဖော်ပြခွင့် မရရှာတော့ပါ။
so beautiful..cartoon...so great Ko Han Lay... God bless to ur hands.... tq alot Dr.
Lum swe for posted for us.............tq
Go and Die quick !
ဧရာဝတီက ကောင်တွေခေါင်းထဲ စစ်ခွေးတွေရဲ့ ဟိုအရည်တွေဝင်နေတော့ ကိုဟန်လေးကို ပယ်ထားကျတာနေမှာပေါ့ စွန်ကျစ် ကိုကောင်းရဲ့။
အားလုံးသော ပြည်သူတွေ တိုင်းပြည်အတွက် အပြုသဘောဆောင်သော စိတ်မွေးနိုင်ပါစေ
ဧရာဝတီမှာ ဖေါ်ပြခွင့်မရတာက ဖြစ်ရပ်မှန်တွေမို့မရတာပါ။ အဲဒီတော့ ဧရာဝတီက ဦးသိန်းစိန် ဘောဘီချွတ် အစိုးရ ငြိုပြင်မည့်ကိစ္စကို ဝေးဝေးကရှောင်တာပေါ့-ဒါမှ သတင်းလိုက်ခွင့်ရမယ်လေ- ငွေပေးတဲ့ အင်ဂျီအို တွေက အထဲရောက်ကုန်တော့ အထဲနဲ့ အပြင် သူ့ ထက်သူ ပိုသာအောင် နေရာယူလုကြတာပေါ့-ပြည်သူတွေ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့-
Aphay Gyi said...
Genius! Continue drawing .
ကိုယ့် ညီ အလုပ် တခုခု မှာ ကုသိုလ် ပညာ ဥစ်စာ တခု တော့ ရမှ အဒီ အလုပ်က လုပ်သင့် တယ်ကွ ။ အမှား ကင်း တဲ့ ခေါင်း ဆောင် ရှိရင် တဆိတ်လောက် ပြော ပြ ပါ့ လား ။ ဝေ ဖန်တယ် ဆိုတာ က အစွန်း မ ရောက်ဖို့ တော့ လို ပါတယ် ။
အမိ ယုတ်ငြား ထိုသူကား စကားရိုင်းခြေ ဧ။် ။ အဖ ယုတ်ငြား ထိုသူကား ရမ်းကားမိုက် မဲ ဧ။် ။ မိဘ နှစ်ပါး ယုတ်မူကား ထိုသား အားလုံး ယုတ်ခြေ ဧ။် ။ ။
ညီအကို တွေ ဆွေးနွေးကြ ရာ မှာ ဒေါသ ကို မသုံး သင့် ဘူး ။
ye htun linn said...